Archive du 20170520
Hery Rajaonarimampianina Ialan�ny ekipany tsimoramora
An-dalam-paharendrehana ny sambo ka manomboka ialan�ny namany i Hery Rajaonarimampianina amin�izao fotoana.
Fampihavanam-pirenena Baiko midina ny nandaniana azy
Tsy voatery ho mahay lal�na na mahafehy ny fomba fandanian-dal�na avokoa ireo solombavambahoaka na loholona lany eny anivon�ny parlemanta, hoy ny depiote Hanitra Razafimanantsoa.
Adin�ny SMM sy ny governemanta Nandamin-dresaka ny praiminisitra
Niteraka tsy fifankahazoana lalina teo amin�ny fitsarana sy ny governemanta ny fanambarana nataon�ny praiminisitra,
Taratasin�i Jean Jean be marenina !
Dia ahoana ry Jean ! 7 andro amin�ny 7 andro mihitsy anie tamin�ity herinandro ity ny kianja sy fitarainana ary fitakiana fametraham-pialana niantefa tany aminareo izay e ! Eny e !
Ambano-Antsirabe II Nahavoly zanakazo 15 000 ny miaramila
Mitohy ny asan'ny servisy sivika ao amin'ny kaominina Ambano, distrikan'Antsirabe faharoa tarihin'ny jeneraly Rakotosalama Zefania Rivo.
ANTOKO MPIHIRA TARATRY NY MAZAVA Mankalaza ny faha-45 taona niorenany
Mankalaza ny faha-45 taona niorenany ny antoko mpihira taratry ny Mazava eo anivon�ny fiangonana Fjkm Ambohidanerana, Synodam-paritany Atsinanana.
Tena gidraka sa sarin�ady ?
Mpanolotsain�ny filoham-pirenena miisa roa no nesorina tao anatin�ny roa herinandro, raha ny vaovao mivoaka amin�izao fotoana izao. Sarimihetsika sa inona indray ny antony fa raha ny re aloha dia voalaza fa niray tsikombakomba tamin�i Claudine Razaimamonjy sy namporisika ny resaka fitsipaham-pitokisana ny governemanta no antony nandakana azy ireo.
Raharaha Claudine Razaimamonjy Aoka hifanaja isika, hoy ny HJRA
Namoaka fanambarana ny eo anivon�ny foibem-pitantanan�ny CHU JRA na ny Hopitaly HJRA etsy Ampefiloha omaly. Votoatin�ny resany ny fampahafantarana ny besinimaro fa ny marary rehetra dia manana ny satany manokana sy ny zony hahazo fitsaboana araka ny tokony ho izy.
La Grande braderie de Madagascar Hanomboka ny 24 mey izao
Hotanterahina ny 24-28 mey ho avy izao etsy amin�ny lapan�ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina indray ilay hetsika La grande braderie de Madagascar, karakarain�ny Madavision. Anisan�ny hampiavaka ny hetsika ny fisian�ny fihenam-bidy amin�ny entana rehetra ka 15 % no ambany indrindra, hoy Ramanantsoa Harilala.
Vondrona STAR 180 miliara Ar ny hetra naloany tamin�ny 2016
Orinasa iray anisan�ny mandray anjara mavitrika amin�ny fandoavan-ketra ny vondrona Star.
Mpampianatry ny oniversite �Feno ny kapoaka !�
Raha voalaza ho niravona ny hetsiky ny mpianatra teny amin�ny anjerimanontolo teny mikasika ny fitakiana ny fampiakarana ny fampitaovana sy ny filam-pikarohan�izy ireo dia ry zareo avy eo anivon�ny sendikan�ny mpampianatra mpikaroka (SECES) kosa indray omaly no nivory hijerena ny dingana tokony hatao hanatanterahana ny fitakian�izy ireo hatramin�ny taona 2009.
ECCOVA Nahavita ny fanadinana ara-panjakana ny mpianatra
Toy ny fanaony isan-taona dia nahavita ny fanadinana ara-panjakana andiany faharoa tamin�ity taona 2017 ireo mpianatra eo anivon�ny Ecole de Coupe et Couture Volana.
IKM Antsahavola, ONG Lalana Hiara-kiasa amin�ny minisiteran�ny fanabeazam-pirenena
Sonia telo sosona no indray notontosaina tetsy amin�ny minisiteran�ny fanabeazam-pirenena afaka omaly.
Joun�e de l�Afrique Nomena lanja ny tanora
Nomarihana omaly zoma 19 mey teny Ivandry ny andron�i Afrika na ny � Journ�e de l�Afrique � 2017 niaraka tamin�ny fankalazana ny faha-54 taona nijoroan�ny Firaisambe Afrikanina.
Hery vonjitaitran�ny polisim-pirenena Hiady amin�ny fakana an-keriny
Lanonana 2 sosona no notanterahana tetsy amin�ny toby Bertin Razafindrazaka etsy Antanimora omaly.
Vita ary notokanana omaly zoma ilay ozinina hamokarana "Ethanol" naorin'ny FLM ao Antsirabe.